MAITIRO EKUMISIKIDZA YOUTUBE RIMA MODE - NYORO
Maitiro Ekumisikidza YouTube Rima Mode
Munyika ino yehunyanzvi, isu tinogara tichisungirirwa kumagajeti uye avo skrini. Kunyanya kushandisa gadget kwenguva yakareba kunogona kukanganisa maitiro edu pahutano, uye kunogona kunetesa kuona kwedu patinogara tichitarisa pamadhijitari ari munzvimbo ine mwenje wakaderera. Kana iwe uri mune kusahadzika uchifunga kuti ndeipi iyo yakakosha kudzoreredza kutarisa ako masystem masisitimu mune yakaderera mwenje setup? Zvino rega ndikutaurire zvese zvinobata nechiedza chebhuruu chinoburitswa kubva kumacomputer skrini. Nepo mwenje webhuruu uchitsigira pakuona yako dijitari sikirini pasi pechiedza chezuva-mwenje, kana vashandisi vemakomputa vachitarisa zvigadzirwa zvemadhijitari zvinoburitsa mwenje webhuruu husiku hwese kana mune yakadzika magetsi setup, zvinogona kukonzera kuneta kwepfungwa dzevanhu nekuti zvinotungamira mukukanganiswa ako maseru ehuropi, kumanikidza kwemaziso uye kutadzisa kurara maitiro anogona kukonzera kukuvadza kuhutano hwako.
Nekudaro, YouTube inounza theme yerima iyo, mushure mekugonesa, inogona kudzikisira kuitika kwechiedza chebhuruu munzvimbo ine rima uye zvakare kudzikisira kushushikana pameso ako. Muchikamu chino, iwe uchadzidza nezve maitiro ekugonesa rima modhi yeYouTube.
kana kutamba kusingatange munguva pfupi chrome
Maitiro 1: Gonesa YouTube Yakasviba Mode paWebhu
Maitiro 2: Nemaoko Activate YouTube Rima Maitiro
1. Vhura waunofarira Web browser.
2. Type mubhawa rekero: www.youtube.com
3. Pawebsite yeYouTube, tinya iyo profile icon pakona yepamusoro-kurudyi. Ichabuda nemutsva mutsva yesarudzo dzeakaundi yako.
4. Sarudza iyo Rima Tema sarudzo kubva kumenyu.
5. Dzvanya pa Shandura bhatani kuO ON kugonesa iro rima theme.
yemunharaunda netiweki haina kana inoshanda ip yekugadzirisa windows 10
6. Uchaona kuti YouTube inoshandukira kune rima theme, uye ichataridzika chakadai.
Maitiro 2: M gore negore Activate YouTube Rima Mode
Kana iwe usingakwanise kuwana YouTube Yerima Maitiro saka usanetseke sekushandisa nzira iyi, unogona nyore kugonesa rima theme kune YouTuber tevera nhanho idzi:
Zve Chrome Browser:
1. Vhura Youtube mu Chrome browser.
2. Vhura menyu yeMushanduri nekudzvanya Ctrl + Shift + ini kana F12 .
3. Kubva pamenu yekuvandudza, chinja ku Kunyaradza tab uye nyora inotevera kodhi uye tinya Enter:
4. Zvino Shandura iyo Rima modhi kuenda ON kubva kuZvirongwa . Nenzira iyi, iwe unogona nyore kugonesa iyo yakasviba modhi mubrowser yako yewebsite yeYouTube.
netflix app haizotakure windows 10
1. Mune kero bar kero www.youtube.com uye pinda kune yako YouTube account.
2. Dzvanya pa mitsara mitatu (Zvishandiso) wobva wasarudza Webhu Inovandudza sarudzo.
maitiro ekumisa chrome kubva kushandisa yakawandisa cpu
3. Zvino sarudza Web Console & nyora inotevera kodhi
gwaro.cookie = VISITOR_INFO1_LIVE = fPQ4jCL6EiE
4. Zvino, enda kune yako nhoroondo muYouTube & tinya Rima Mode sarudzo.
5. Toggle bhatani kuti ON kuti simba YouTube Dark Mode.
ZveMicrosoft Edge Browser:
1. Enda ku www.youtube.com & pinda muakaundi yako yeYouTube mubrowser yako.
2. Zvino, vhura Zvishandiso Zvekuvandudza muEdge browser nekutsikirira Fn + F12 kana F12 kiyi yekudimbudzira.
3. Chinja kune Kunyaradza tab uye nyora inotevera kodhi:
chitarisiko 2007 isiri kupindura windows 7
4. Rova Pinda & uvandudze peji racho kuti gonesa ' Rima Mode 'YeYouTube.
Uninstall Internet Explorer kubva Windows 10
5 Nzira yekubvisa Mifananidzo kubva paPaul Faira
Ungachinja sei Akaundi Username pane Windows 10
Maitiro Ekugadzirisa Screensaver mukati Windows 10
Ndinovimba matanho ari pamusoro apa aibatsira, uye ikozvino unogona nyore shandisa iyo Yakasviba Mode paChannel, Firefox, kana Edge browser , asi kana uchiri nemimwe mibvunzo maererano negwara rino, ndapota inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
windows chimiro chekuvandudza 1903 chakundikana
purinda mutyairi haina kuiswa oparesheni haina kukwanisa kupera
google chrome hapana kurira kugadzirisa
gadzira chrome nekukurumidza windows 10
itunes haina kugona kubatanidza 0xe80000a
printer chimiro chinokanganisa windows 10
iTunes isiri kushanda nema windows 10